WARARKA BARAAWEPOST Talaado 13 december 2011
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo qalab Musik guddoonsiisay Ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye Guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa maanta qalabka lagu garaaco musikada ku wareejiyay kooxda musikada ciidamada Booliska Soomalaiyeed, qalabkaas oo ay soo iibiyeen jaaliyadda Soomalaiyeed ee ku nool magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden.
Qalabkan ay jaaliyadda magaalada Gothenburg ugu deeqday ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo ah qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu garaaco Musikada ayaa waxaa maanta ku wareejiyay kooxda baandada Muusikada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha Ciidanka booliska S/Guuto Shariif Sheekhunaa Maye.
Qalabkan oo ku kacay qiimo lacageed oo gaaraya 25 kun oo dollarka maraykanka ah ayaa waxaa soo iibiyay oo ugu deeqay ciidanka Booliska jaaliyadda soomaalida ku nool magaalada Gothenburg oo ah caasimadda labaad ee waddanka Sweden si qalabkaani loogu garaaco musikada loogu tala galay in lagu sameeyo munaasabadda maalinta booliska Soomaliyeed oo ku beegan 20 bisha December iyo soo dhoweynta madaxda booqanaysa dalka.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Shariif Sheekhunaa Maye oo ka hadlay qalabkan casriga ah ayaa sheegay in kooxda lagu wareejiyay looga baahanyahay in ay qalabkaas xafiddo oo ay xil iska saarto sidii ay ugu adeegi lahaayeen shacabkooda.
General Maye oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in bisha January ee sannadka cusub ee 2012 uu u safri doono dalka Talyaaniga si uu qalab kale ugu keeno ciidamada booliska gaar ahaan baandada Musikada, waxaana uu intaasi raaciyay taliyuhu in dowladda Suudaan ay aqbashay in dalkeeda lagu soo taboaaro dhallinyaro cusub iyo macallimiinta dooneysa in ay soa bartaan habka loo garaaco Muskikada.
Taliyaha kooxda musikada ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed G/le Dhexe Salaad Maxamed Abtidoon �Salaad Waaberi� ayaa uga mahadceliyay taliyaha booliska dadaalka uu ku bxinayo qalabaynta baandd musikada iyo ciidanka boolsika qeybihiisa kala duwan isagoo ka codsaday in la dalacsiiyo qaar ka mid ah kooxda oo muddo dheer ku soo shaqeynayay duruufaha adag ee uu waddanku soo maray islamarkaana weli u taagan in ay u adeegaan ummaddooda